The Rohingya News Bank : ANP
Showing posts with label ANP. Show all posts
ရခိုင် နိုင်ငံရေးသမား ဦးဖေသန်း ANP ပါတီမှ နုတ်ထွက်စာ တင်ထား
ANP ပါတီမှ နုတ်ထွက်စာတင်ထားသည် ဆိုသော ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဖေသန်း / ဧရာဝတီ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP)၏ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် မြေပုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ‌ဟောင်း ဦးဖေသန်းမှာ ပါတီမှ နုတ်ထွက်စာ တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်က နုတ်ထွက်စာ တင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အချိန်တွင် ပါတီ တာဝန်မရှိတော့ ‌ကြောင်း ဦးဖေသန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
Labels: 2021, ANP, mm, စစ်ကောင်စီ, ရခိုင်, သတင်း, ဦးဖေသန်း
ရခိုင်စစ်ပွဲနှင့် သူ၏ဇာတ်ကောင်များ (အပိုင်း ၁)
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဟုဆိုလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ပွဲသည် ထိပ်ဆုံး ရောက်နေသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်ဟု ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းပယ်ရန် မရှိပေ။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်၏ ပြည်တွင်းစစ် (တပ်မတော်မှ သောင်း ကျန်းသူ နှိမ်နင်းရေးစစ်ပွဲဟု သုံးပါသည်) တွင် အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ ရခိုင်စစ်မြေပြင်တွင် ဖြစ် သည်။
Labels: 2020, AA, ANP, mm, ဆောငျးပါး, တပ်မတော်, ရခိုင်စစ်ပွဲ, ပြောက်ကျားစစ်ပွဲ
Authors: Kyaw Lynn
Programmes:Myanmar in Focus
Arakan Army troops in forest training / Photo credit JG
When political analysts in Myanmar and beyond discuss the role of ethnic armed organisations (EAOs) in the struggle against the military coup in February, the Arakan Army (AA) becomes one of the key political forces in shaping their dialogue and perceptions. The AA, the military wing of the United League of Army (ULA), is the only armed group that can challenge the power of the national armed forces (Tatmadaw) on Myanmar’s western frontiers. This became especially evident during the 2018-20 period when the ULA-AA demonstrated its sharp resistance against the power of the centralised Myanmar state. Behind the ULA rise, there were three key features: popular support among the Rakhine population, well-trained soldiers, andayounger leadership that read the evolving mood and political situation in the country perceptively well.
Labels: 2021, AA, ANP, Arakan Army, Military Coup, Myanmar, NLD, NUG, ULA-AA
An anti-regime protest in Yangon on Feb.14. / The Irrawaddy
While many of Myanmar’s key pro-democracy political parties have rejected an invitation from the regime’s election body toameeting on Friday, others have decided to attend it, risking public outrage.
Labels: 2021, AFP, ANP, Article, DPNS, en, News, NLD, Pro-Democracy, SNLD, UEC
Arakan’s ANP facing pressure over cooperation with military’s State Administration Council
The Arakan National Party (ANP) will monitor the inclusion of Daw Aye Nu Sein,atop leader of the ANP asamember of the State Administration Council, foracertain period of time, said U Tha Tun Hla, Chair of the ANP.
The decision was arrived at the CEC meeting of the ANP held in MraukU Township of Arakan State from February 12 to 14.
The party hadathorough discussion on her inclusion in the State Administration Council.The party faces criticism due to the inclusion in the State Administration Council.The CEC meeting was attended by more than 80 party members. The party laid down three-point decision.
“Three-point decision arrived at the meeting are:
Labels: 2021, Administration Council, ANP, en, News
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ ဒေါ်အေးနုစိန်
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသစ်မှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ ဒေါ်အေးနုစိန်ကို ထပ်တိုးထည့် သွင်းခဲ့တာကို လက်ခံခဲ့တာက၊ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအရမရင့်ကျက်သေးချိန်မှာ၊ အရင်အစိုးရမဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စစ်ဒဏ်ခံရခိုင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်မျှော်မှန်းလုပ်တာသာ ဖြစ်တယ်လို့၊ ANP ပါတီ မူဝါဒရေးရာဦး ဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးဦးလှစောက ဆိုပါတယ်၊ ကိုဝင်းမင်းကမေးထားပါတယ်။
အရင် ၁၁ ဦးပါ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲ နောက်ထပ် ၅ ဦးထပ်တိုးဖွဲ့လိုက်တဲ့ အထဲ၊ အခုလို ANP လက်ခံခဲ့ပုံကို ဦးဦးလှလှစောက -
ဦးဦးလှစော ။ ။ ဒေါ်အေးနုစိန်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ANP အနေနဲ့ လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့။
ဝင်းမင်း ။ ။ ဘာကြောင့်မို့လို့ လက်ခံလိုက်တာလဲ။
ဦးဦးလှစော ။ ။ လက်ခံတယ်ဆိုတာကလေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီအပြောင်းအလဲမှာတော့၊ တစ်စုံတစ်ရာပူးပေါင်းပြီး တော့ အခြေအနေတရပ်ကို ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအခြေအ နေအသစ်၊ အခု အခင်းအကျင်းသစ်ထဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် ဘာတွေများမျှော်လင့်နိုင်မလဲ ဆို တာကို စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။
Labels: 2021, ANP, mm, စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ, သတင်း, ဒေါ်အေးနုစိန်
ရိုဟင်ဂျာအရေး နိုင်ငံတကာဖိအား လျှော့ချနိုင်မယ့် နည်းလမ်း
MCN TV NEWS CHANNEL
2021 Jauary 2021
❖ ရိုဟင်ဂျာအရေး နိုင်ငံတကာဖိအား လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဒေသခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုအသီးသီးနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက် ဖို့က NLD အစိုးရ ဒုတိယသက်တမ်းမှာ ဘယ်လောက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်နေပါလဲ။
❖ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သလို မြေပုံ မြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်နဲ့ မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Labels: 2021, ANP, mm, Q&A, Video, ရိုဟင်ဂျာအရေး, ဦးဖေသန်း
ရခိုင်စစ်ပွဲနှင့် သူ၏ဇာတ်ကောင်များ (အပိုင်း ၇)
ပလက်ဝမြို့နယ် ကျေးရွာတွေမှာ AA လက်နက်ကိုင်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ် / အောင်ကျော်ထက် / ဧရာဝတီ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများရှိသည်အနက် လက်ရှိ အအောင်မြင်ဆုံးနှင့် ရခိုင်လူထုကြား သြဇာအရှိ ဆုံးပါတီမှာ ANP ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံ ညီလာခံတွင် ANP ပါတီက တင်သွင်းသော စာတမ်း အရ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ANP ပါတီ လိုချင်သော နိုင်ငံရေးရည်မှန်း ချက် မှာ ကွန်ဖက်ဒရိတ် အဆင့်အတန်း ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ANP နှင့် AA လျှောက်လှမ်းသည့် ပုံစံမတူ သော်လည်း နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်မှာ ယေဘုယျ အားဖြင့် တူညီသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
Labels: 2020, AA, ANP, mm, တပ်မတော်, ရခိုင်စစ်ပွဲ, ဧရာဝတီ, ဆောင်းပါး, ပြောက်ကျားစစ်ပွဲ
ရခိုင်စစ်ပွဲနှင့် သူ၏ ဇာတ်ကောင်များ (အပိုင်း ၆ )
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြု၍ စစ်အင်အား၊ လက်နက်ခဲယမ်း၊ ရိက္ခာသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများကို တွေ့ရသည် / ဧရာဝတီ
တပ်မတော်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဦးစွာရင်ဆိုင်ရသည့်ပြဿနာမှာ ရိုဟင်ဂျာဟု မိမိကိုယ်မိမိခေါ်ဆိုသော ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင် ပြသနာဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင်များအား နအဖ တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက်က ဝှိုက်ကဒ် White card များ ထုတ်ပေးထားခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခွင့် ပေးထားစဉ်က ဘင်္ဂါလီများနှင့် တပ်မတော်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီတို့ အကြား ဆက်ဆံရေးကောင်း မွန်ခဲ့သည်။
Labels: 2020, AA, ANP, Article, mm, တပ်မတော်, ရခိုင်စစ်ပွဲ, ဆောင်းပါး
ရခိုင်ပြည်နယ် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်သုံးပါတီ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရန် ALD ပါတီ မျှော် လင့်
လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရန် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) နှင့် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) တို့ကို ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (ALD) က ကမ်းလှမ်းထားသည်။
မတ် ၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မတ် ၄ ရက်အထိပါတီ နှစ်ခုထံမှ အကြောင်းပြန်စာ မရရှိသေးကြောင်း ALD ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးကျော်က ပြောကြားသည်။
Labels: 2020, AFP, ALD, ANP, mm, သတင်း, ဦးခင်နု, ဦးမျိုးကျော်, ဦးသာထွန်းလှ
ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အချက်(၄)ချက်ပါကြေ ညာချက် ANP ထုတ်ပြန်
စစ်တွေ၊ ဇူလိုင် ၃/၂ဝ၁၉
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချက် (၄) ချက်ပါ သဘောထား ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) မှ ယနေ့ ဇူလှိုင် (၃) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်။
Labels: 2019, ANP, mm, နိရဉ္စရာ, ရခိုင်အရေး, သတင်း, သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ရခိုင်အရေး တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးဖို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မ တော် ကို ANP တောင်းဆို
02 ဇွန်၊ 2019
ရခိုင်စစ်ရှောင်ပြည်သူများ (Rakhine Ethnics Congress )
တပ်မတော်နဲ့ AA လက်နက်ကိုင်တပ်တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရ မှုတွေကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ တာဝန် ယူ စုံစမ်းဖြေရှင်းပေးဖို့ ရခိုင်စစ်ရေးဖြစ်စဉ်တွေကို ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့တဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ခြောက်မြို့နယ်ထဲက ဒေသတွင်း အရပ်သား ထိခိုက် သေဆုံးမှု၊ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ပျက်စီးမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းတွေ့ရှိသမျှ အစီရင်ခံ စာတစောင် ထုတ်ပြန်အပြီး ANP စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ မဆုမွန်က ပြောပြပေးမှာပါ။
Labels: 2009, AA, ANP, mm, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ့တပ်မတော်, ရခိုင်, သတင်း, အစီရင်ခံစာ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ AA အဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲကာလအတွင်း အရပ်သားတွေထိခိုက်မှု အခြေ အနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP က လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ဒီနေ့ ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, ANP, mm, RFA Burmese, ထုတ်ပြန်, သတင်း, အစီရင်ခံစာ
Myanmar Army Launches Helicopter And Jet Strikes in Fierce Fighting in Rakhine State.
A view of the entrance to the police battalion headquarters in Myanmar's northern Rakhine state, March 2019.
The Myanmar military unleashed helicopter and jet strikes in response to the rebel Arakan Army's (AA) on-the-ground attacks onapolice residential unit and battalion headquarters believed to contain heavy arms belonging to government troops in war-ravaged Rakhine state’s Mrauk-U township, with spokesmen for the two forces releasing competing, imprecise casualty counts.
Labels: 2019, AA, ANP, Arakan Army, Civilians, CSOs, en, IDP, Mrauk-U, Myanmar Military, Rakhine rebels, Rakhine state Police, RFA English
President sets up new committee on Rakhine.
NYAN LYNN AUNG | 10 APR 2019
President U Win Myint has establishedanew committee on Rakhine State to help ensure peace and stability in the region.
Members of the Assistance Committee on Rakhine State Peace and Stability arrived in Rakhine’s capital, Sittwe, on Tuesday to meet officials and local people, according to U San Kyaw Hla, speaker of the Rakhine parliament.
Labels: 2019, ANP, Committee on Rakhine, en, Myanmar Times, News, Rakhine Parliment, Rakhine State, U Win Myint
ဘူးသီးတောင်မှာ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းရွှေ ပြော
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် နွားရုံတောင်ကျေးရွာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စံဂိုးထောင်ရွာထဲကို မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ မနေ့ကတည်းက လက်နက် ကြီးကျည်တွေ ကျရောက်တာကြောင့် ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ ANP ပါတီက ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းရွှေ က RFA ကို ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, ANP, mm, စံဂိုးတောင်, တပ်မတော်, ဘူးသီးတောင်, ရခိုင်, ဦးအောင်သောင်းရွှေ